Sehlile isibalo sabashone ezingozini zikaKhisimusi | News24
Sehlile isibalo sabashone ezingozini zikaKhisimusi
Johannesburg - Sehle ngo-35% isibalo sabashone ezingozini zomgwaqo ezenzeke kusukela kuqale isiphithiphithi sebhizi kaDisemba, izehlakalo zezingozi zona zehla ngo-42%, uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka owedlule.
Izibalo zikhishwe nguNgqongqoshe wezokuThutha uDipuo Peters, ngoLwesithathu.
"Izibalo ziphansi uma kuqhathaniswa nangonyaka owedlule, ngesikhathi esifanayo. Kubalwe izingozi ezingu-539, ekushone kuzo abantu abangu-677. Ngonyaka owedlule ngalesi sikhathi, zabe sezingu-764 izingozi, kushone abangu-917," kusho isitatimende sikaPeters.
Ungqongqoshe uthi abagibeli yibo abashona kakhulu ezingozini, kuze abantu abahamba ngezinyawo.
Baku-37% abagibeli abashonile, babe ku-35%, abahamba ngezinyawo, babe ku-25% abashayeli, babe ku-2%, abahamba ngamabhayisikili kanti u-1% akucaci kahle ngawo.
"Sikhathazekile ngezibalo zabantu abashonayo, akuvumelekile neze ukuthi kushone abantu emigwaqeni."
Izibalo zhlanganiswe kusukelwa kumhla lulunye kuDisemba kuya kumhlaka-23.